7 Best Ukutya Tours To Experience EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Best Ukutya Tours To Experience EYurophu
Yiya kwi ebingalingi kumnyumbaza ungcamla incasa kwaye bathathe inxaxheba ezithathwa best ukutya eYurophu. Ukuba i foodie ukufunda, ekhuhlangubeni lakho, kwakunye lakho Instagram izakuxhumela luvuyo nawe uya kufumana into. Kanjalo, Eyona ndlela yokundwendwela ubukrelekrele bokupheka kwizixeko ezidumileyo eYurophu ngololiwe. Here are our top of 7 Best Ukutya Tours To Experience EYurophu.
1. Ukutya Tours To Experience EYurophu: Ukusuka Baguettes To Bistro In Paris, Fransi
Ukuba kukho umzi lowo kungaba knock iikawusi zakho off nge ngobuhlakani zokupheka, sayo Paris kwaye, ke, wokuqala kuludwe best ezithathwa ukutya eYurophu. Nje ngeziphumo, babalekayo Paris ukhenketho ezininzi ukutya kufuneka kunokuba kubizwa ngokuba emfundo ukudla kuba zinetyala kwimbali. Izithethe ziye zadluliselwa ukutyhubela iinkulungwane.
Iphefumlelwe bubuncwane izindawo.
Yonke into ndizifihle iziseko isonka samasi ukuya atyiwe yabo edumileyo, foie Gras kwakunye rillettes ekhaya kunye Armagnac. Ukwengeza, kwakhona nasemva izindawo amasiko cafe.
Ngumoya indlela yakho kwizitrato ecaleni yaye unokubothusa ngokwakho kwi zokutyela ezininzi kangakanani emfanelayo, cafes, Delis, kunye boulangeries kukhona. Nje ngeziphumo, uya kutyhilwa kwimixube egqibeleleyo yeendlela zokupheka ezindala kunye nokutsha kunye nokuhamba kwezinto kwindawo yokutya.
2. Food Extravaganza: Amsterdam, Inetherlands
Ukuba ufuna ukubona icala ezahlukeneyo Amsterdam nesigcawu yayo foodie, ukuhlola iinkundla kunye nezitalato esingasemva District Jordaan. Nje ngeziphumo, uya kufumana purveyors ukutya ilangazelela ukuba ukwabelana indalo zabo kwakunye unikeze siqonde ubutyebi lemveli zokupheka Indonesian esi sixeko.
Sicebisa ukuba uzame payi apile kwi cafe kunyaka-400 ubudala lenkundla, Cafe Papeneiland. Kananjalo uzame nesoseji ngumsi ezenziwe iresiphi usapho leminyaka ubudala kwaye bafunde indlela Dutch ukuba adle herring.
3. Ubuchule Of Craft Beer & Food In Prague, Umphakathi waseCzech
Ukuba ngaba uzifumanisa e Prague, ukwenza oko hipsters ntoni kwaye sibe craft beer ngokunjalo imarike yokutya tour. Unga nokuba uthathe uhambo nge ingcali beer. Baya kukuvuyela ukuba on a Pivo kuwe (ibhiya) uhambo Ngokungafaniyo nabanye.
ngokwendalo, craft umqombothi usoloko elifunyanwa ngokutya ezimbalwa ukukhetha Ulahlekwe bendawo. Ukwengeza, yayeou ungazama amaqanda scotch okanye amadombolo Czech kunye yenkomo braised ukuba sibala nje ezimbalwa yobuncwane foodie Prague. Yinto a eziqondile kuluhlu lwethu best ezithathwa ukutya eYurophu.
4. Ukutya Tours To Experience EYurophu: Izithethe Age-Old In Madrid, Speyin
Kuba adventure bonafide foodie, Madrid alidanisi! Meander ngokusebenzisa abathengisi bendawo Madrid kunye nabo kunye restaurateurs. zama iwayini lendawo netshizi uyayoliswa Martin Market wembali Anton. Ngaba ezinye, ngokuphikisana, i cheesecakes engcono kwihlabathi, ezinye zazo nowezonkana ezisicaba ezingenagwele oveni kunyaka-elikhulu ubudala.
5. Ivumba The City Ukusuka An wangaphakathi lwembono: Venice, ElamaTaliyane
Incwadi ukhenketho ukuba awufuni ukuba sangena Venice. Book nomntu ozaziyo ins kunye outs aloo mzi nendlela mhlawumbi ukunqanda izihlwele yaye uyifumanayo ubuncwane obufihliweyo. Njengokuba, thatha ukukhwela ngapha emjelweni pondola kwindawo yokutyela ipasta usele iglasi prosecco phambi ukhangela ezinye imivalo iwayini odumileyo, ludumile zendawo Casanova xa.
6. Ukutya Tours To Experience EYurophu: I-International Food Scene In Berlin, Jemani
ndawo ukutya Berlin kaThixo ilungile kwi mkhuba negolide ukutya ngamazwe, kwaye ngenxa yoko, yeyona ndawo ilungileyo yokwenza abahlobo xa usiya kutya. Ayikho into eyenza abantu kunye kakhulu njengoko ukudla.
Sicebisa ukuba ucinge ukhenketho ukutya wena othile wendawo apho ezinokuqengqeleka up imikhono zakho uze ulungise ngokwakho isidlo yemveli, Berlin-style.
Ukuba awufuni ukwenza yonke into ngokwakho:
Jonga iMakethi yaseTurkey yaseKreuzberg okanye umise (okanye abathathu) e cafes ezahlukeneyo kubhakwa.
7. An eyoQobo Foodie Experience: Vienna, Ostriya
EVienna konke charm, kunjalo oku ingakumbi xa kuziwa ezithandwa. It has a ukuchana uvalo kwaye kufuneka uqale ngotyelelo ukuya kwindlu zakudala coffee Viennese. Ukususela indlu coffee, ungenza indlela yakho Naschmarket ethandwayo, gem lemveli kunye neentlobo ngeentlobo amakhono Austrian ezibandakanya sisi neviniga.
Ukuba anithanga niyidle yisoseji kunye uthabathe pic yayo gram xa uqubha Wurstelstand, ke wena akukho? 🌭But for real, baneesoseji ezimangalisayo! Zihlambe uyayichitha ezinye iiwayini Austrian kwindawo efihlakeleyo yimbali iphele konke off kakuhle nabanye dessert delish ngokundwendwela i ivenkile enkulu chocolate. 🍫
Ukutya Tours To Experience EYurophu: isiphelo
Le ekuhambeni best ukutya eYurophu ziyilelwe ukuba avuthele nje ingqondo yakho kunye nenkalakahla. Akukho ukunqongophala ongakhetha.
Naphi na apho uya khona, Ukubrawuza uluhlu lwe yohambo ezingenza suti engcono.
Khetha yintoni obungathanda amava kunye nokusetyenziswa Gcina A Isitimela neemfuno zohambo lakho uloliwe.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “7 Best Ukutya Tours To Experience EYurophu ” kwi sayithi yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F%3Flang%3Dxh ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukutyazana FoodScene FoodTour Instagram TrainsInEurope train Travel